Bogotá`s tourism na-anọchite anya 29.1% nke ọrụ ndị njem Colombia
Home » Akụkọ Njem Nleta » Bogotá`s tourism na-anọchite anya 29.1% nke ọrụ ndị njem Colombia
Bogotá nwere ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ anọ nke njem nlegharị anya Colombia
Bogotá´s tourism GDP na-akpata 2.5% nke akụnụba obodo, ngụkọta nke US $ 1.8bn, gosipụtara akụkọ ọhụrụ site na World Travel & Tourism Council (WTTC), Latin America City Travel & Tourism Impact. Bogotá`sism njem nlegharị anya na-anọchite anya 29.1% nke ọrụ ndị njem na Colombia.
Latin America City Travel & Tourism Impact bụ otu n'ime usoro nke WTTC na-akọ nke na-eleba anya na ntinye nke Travel & Tourism na akụ na ụba obodo na ọrụ okike. Ọmụmụ ihe ahụ gụnyere obodo 65, isii n’ime ha dị na Latin America.
International na-emefu ego maka 41% nke Bogotá si enweta njem nleta, na-egosipụta mkpa ndị ọbịa mba ụwa maka obodo ahụ. Ọtụtụ njem bụ maka ezumike karịa ebumnuche azụmahịa. Ahịa mba ụwa kachasị elu bụ United States (27%), Mexico (10%), Spain (5%), Brazil (5%) na Argentina (4%). Nchọpụta ụlọ ka na-akpata 59% nke ego ndị njem na-enweta, na ịkwụ ụgwọ site na ndị mbata nke Colombia ga-amụba okpukpu abụọ site na 2026.
Onyinye nke ngalaba njem njem na njem nke Colombia na GDP bụ COP51,05bn (US $ 16.7bn), ma ọ bụ 5.8% nke GDP. Onu ogugu nke Travel & Tourism na oru, tinyere oru nke ndi ulo oru kwadoro, bu 6.1% nke oru nile (oru 1.3 nde). N'ime afọ iri na-abịanụ, a na-ebu amụma mpaghara ahụ iji mepụta ọrụ 219,500.
Banyere WTTC: World Travel & Tourism Council bụ ikike zuru ụwa ọnụ na onyinye akụ na ụba na nke mmekọrịta nke Travel & Tourism. Ọ na-akwalite mmepe na-adigide maka mpaghara ahụ, soro ndị gọọmentị na ụlọ ọrụ mba ụwa na-arụ ọrụ iji mepụta ọrụ, iji chụpụ mbupụ ma mepụta ọganihu. Kwa afọ WTTC, ya na Oxford Economics, na-ewepụta akụkọ ya Mmetụta Mmetụta Mmetụta, nke na-eleba anya na uru mmekọrịta akụ na ụba nke njem na njem na njem zuru ụwa ọnụ, mpaghara na mba. N'afọ a akụkọ ahụ na-egosi data na mpaghara 25 mpaghara na 185 mba.
Njem njem na njem nlegharị anya bụ ihe dị mkpa maka itinye ego na akụ na ụba ụwa. Ngalaba ahụ na-etinye ijeri US $ 7.6 ma ọ bụ 10.2% nke GDP zuru ụwa ọnụ, na-echebara mmetụta niile dị kpọmkwem, nke na-enweghị isi na nke emetụtara. Ndi oru a choro oru 292 ma obu otu n'ime oru iri nile n'uwa.
Ruo ihe karịrị afọ 25, WTTC abụwo olu nke ụlọ ọrụ a n'ụwa niile. Ndị otu ahụ bụ oche, ndị isi na ndị isi nke ndị isi ụwa, ndị ọrụ aka njem na njem njem, ndị na-eweta ihe ọmụma ọkachamara iji duzie iwu gọọmentị na mkpebi, wee mata mkpa mpaghara ahụ dị.
Nzukọ WTTC a na-eme kwa afọ na nzukọ a na-achịkọta ndị nnọchi anya 900 iji tụlee ohere, nsogbu na nsogbu chere ụlọ ọrụ ahụ ihu, ebe njem nleta ya maka echi ga-amata ikike ụlọ ọrụ iji bụrụ ezigbo ikike na nkwado Mgbakọ ahụ ga-ewere ọnọdụ na Buenos Aires, Argentina, 18 -19 Eprel 2018.
Santiago bụ ọkara nke njem nlegharị anya nke Chile
VistaJet nweta ego Q3 kachasị elu na akụkọ ntolite ya
Akụkọ Njem Netherlands
Thailand Elite akwụkwọ nleta njem njem ka na-acha uhie uhie mgbe afọ 16 gachara
Akụkọ Njem njem Hawaii
Hawaii Tourism Authority na-ahọpụta ụdị oche ọhụrụ Quiksilver